Waa sidee go’aanka qolka labiska ee Barcelona kaga aadan inuu dib u soo laabto Neymar Jr?? – Gool FM
(Spain) 19 Juunyo 2019. Warbaahinta Spanish-ka ah ayaa shaacisay in xiddiga kooxda Paris Saint-Germain Neymar Jr uu taageero weyn ka helayo qolka labiska ee Barcelona, kuwaasoo doonaya inuu ku soo laabto laacibka reer Brazil safka Blaugrana xagaagan.
Waxaa laga deerinayaa xiriirka u dhexeeya ciyaaryahanka iyo maamulka kooxda, kuwaasoo albaabada u furay 27 jirkan haddii uu doonayo inuu bixi karo, ama uusan raacin siyaasadda maamulka ee kooxda.
Xiddiga reer Brazil oo haatan dhaawac kaga maqan xulkiisa qaranka Brazil tartanka haatan socdo ee Copa America 2019, ayaa heysata dhibaato badan ee ka baxsan gudaha garoonka, waxaana lagu eedeynayaa afar dambi, iyadoo ay kiisaskiisa haatan ka socdaan maxkamado kala duwan.
Xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Paris Saint-Germain xagaagan si uu dib ugu laabto horyaalka La Liga ee dalka Spain, gaar ahaan kooxdiisii hore ee Barcelona ama xitaa uu ku biiri karo Real Madrid, iyadoo wararka xanta ah ee ku saabsan mustaqbalkiisa ay sii xoogeysanayaan kaddib hadalada kasoo yeeray madaxweynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi.
Hadaba Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa sheegay in ciyaartoyda Barcelona ay doonayaan inuu dib u soo laabto Neymar Jr, iyagoo aanan eegin qaabka uu kaga dhaqaaqay kooxda, kaddib markii ay bixisay PSG qiimaha lagu kansalay heshiiskii uu ku joogay garoonka Cump Nou ee gaarsiisnaa 222 milyan euros, balse waxay sii ilaashadeen xiriirka ay la leeyihiin saaxiibkood reer Brazil.
Xiddigaha Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa ku dhawaaqay taageeradooda guud ee Neymar Jr waxayna soo dhaweeyeen hadii uu markale dib ugu soo laabanayo garoonka Cump Nou.